व्यवसाय गर्न व्यवसाय वैकल्पिक मार्केटिंग | Martech Zone
व्यवसाय गर्न व्यवसाय वैकल्पिक मार्केटिंग
मंगलवार, मार्च 19, 2013 मंगलवार, सेप्टेम्बर 17, 2013 Douglas Karr
Business to Business (B2B) बजारका लागि एक अवसर विकल्पहरूको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि यातायात लिनु हो। व्यक्तिले अनुप्रयोग खरीदहरू अनुसन्धान गरिरहेका छन् वा उनीहरू दुखी छन् र विक्रेता छोड्न चाहन्छन् - सर्तहरू जस्तै प्रयोग गरेर विकल्पवा जस्तैवा अनुप्रयोगहरू जस्तै तिनीहरूको खोज वर्णन गर्न।
यहाँ एक महान उदाहरण छ - को लागी खोजी Wufoo को विकल्प:
फर्मस्ट्याकले यस खोजी अवसरको फाइदा लिई एक बनाएर उत्कृष्ट पृष्ठ जसले हेडलाई टु हेड फाइदा प्रयोगको वर्णन गर्दछफार्मस्ट्याक वुफुमाथि र अवश्य पनि, किनकि पृष्ठ पर्याप्त प्रासंगिक छ किनकी तिनीहरू यसको लागि धेरै उच्च श्रेणीमा छन्। म कुनै बजारलाई आन्तरिक पृष्ठहरू प्रकाशित गर्न प्रोत्साहित गर्दछु जुन उनीहरूको प्रतिस्पर्धाको लागि उनीहरूको अनुप्रयोगहरू तुलना र कन्ट्रास्ट गर्दछ। केवल निष्पक्ष हुनुहोस् ताकि तपाईं आफ्नो बट तपाईं हातमा नलगाउनुहोस्! 🙂
थप रूपमा, त्यहाँ सूचीबद्ध केहि धेरै डाइरेक्टरीहरू छन् तपाईं सूचीबद्ध हुनुहुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न।
वैकल्पिक - वैकल्पिक सफ्टवेयरको विशाल डाइरेक्टरी जसमा खोज इञ्जिनहरूसँग उत्कृष्ट र्याकिंग छ (यद्यपि मैले अनुप्रयोग रैंकिंग र परिणामहरू प्रायः सही हुँदैनन्)।
सेर्चेन - क्लाउड अनुप्रयोगहरू खोज्नको लागि खोजी ईन्जिनले ... समिक्षा समावेश गर्दछ।
GetApp - अनुप्रयोगहरू खोज्नका लागि एक व्यवसाय सफ्टवेयर समीक्षा साइट।
moreofit - एक निर्देशिका साइट जसले समान वेबसाइटहरू फेला पार्दछ। यसले सेवा अनुप्रयोगहरूको रूपमा क्लाउड र सफ्टवेयर पनि समावेश गर्दछ।
समान साइटसाइट खोजी - अर्को निर्देशिका साइटले समान वेबसाइटहरू फेला पार्दछ। यसले सेवा अनुप्रयोगहरूको रूपमा क्लाउड र सफ्टवेयर पनि समावेश गर्दछ।
यी खोजहरूको फाइदा लिन निश्चित गर्नुहोस् जब तपाईं आफ्नो नयाँ व्यवसाय लाई बढावा दिनुहुन्छ। अत्यधिक अनुकूलित आन्तरिक पृष्ठहरू बनाउनुहोस् जुन तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूमा तपाईंको अनुप्रयोगहरू प्रबर्धन गर्दछ। म प्रत्येक शीर्ष प्रतिस्पर्धी को लागी एक पेज निर्माण गर्छु। थप रूपमा, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको अनुप्रयोगहरू माथिल्लो वैकल्पिक खोज इञ्जिनहरू र डाइरेक्टरीहरूमा सूचीबद्ध छन्। तपाईंले सिफारिस गर्नुभएको कुनै अन्य डाइरेक्टरीहरू पाउनुभयो? टिप्पणीहरूमा तिनीहरूलाई थप्नुहोस्!
टैग: वैकल्पिक सफ्टवेयरविकल्पअनुप्रयोग खोज ईन्जिनहरूअनुप्रयोग खोजीहरूb2bb2b विकल्पहरूजस्तै
गुगल सह-घटना: तपाईंले सोचे भन्दा पहिले नै चलाख